Hacking ကို မြန်မာလို အခမဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် Android Application - Khit Minnyo
Unlabelled Hacking ကို မြန်မာလို အခမဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် Android Application
Hacking ကို မြန်မာလို အခမဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် Android Application
Android Application only ပါ
Myanmar Font အဆငျမပွတေဲ့ ဖုနျးတှမှော ကွညျ့နိုငျဖို့အတှကျလညျး Font Change နိုငျဖို့ ပွငျဆငျပေးထားပါတယျ။
Application ထဲမှာ ပါဝငျတာတှကေို အကွမျးဖငျြးပွောရရငျ
၁။ မညျသူမဆို အခမဲ့ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျသညျ့ Free Learning
၂။ ကြှနျတျောရေးသားထုတျဝခေဲ့သော စာအုပျတှအေကွောငျး
၃။ စာအုပျတှနေဲ့ တှဲဖကျလလေ့ာနိုငျမယျ့ Website တှေ
၄။ စာအုပျတှနေဲ့ ခြိတျဆကျဝငျရမယျ့ Facebook Group တှေ၊
၅။ Online Class မှာ တကျရောကျနသေူတှေ ဝငျကွညျ့နိုငျမယျ့ Online Training
Android App မရှိသေးသူမြား အောကျပါ link ကနေ ယူနိုငျပါတယျ။ ရှိပွီးသူမြားကတော့ ဒေါငျးစရာမလိုပါ။ Upgrade လုပျရနျ ပုံလေးတှေ ဆကျကွညျ့ပေးပါခငျဗြာ..
>>> Android App Download link <<<
Myanmar Font အဆင်မပြေတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း Font Change နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Application ထဲမှာ ပါဝင်တာတွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်
၁။ မည်သူမဆို အခမဲ့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သည့် Free Learning
၂။ ကျွန်တော်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်တွေအကြောင်း
၃။ စာအုပ်တွေနဲ့ တွဲဖက်လေ့လာနိုင်မယ့် Website တွေ
၄။ စာအုပ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဝင်ရမယ့် Facebook Group တွေ၊
၅။ Online Class မှာ တက်ရောက်နေသူတွေ ဝင်ကြည့်နိုင်မယ့် Online Training
Android App မရှိသေးသူများ အောက်ပါ link ကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။ ရှိပြီးသူများကတော့ ဒေါင်းစရာမလိုပါ။ Upgrade လုပ်ရန် ပုံလေးတွေ ဆက်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ..
Unknown January 19, 2022 at 10:13 AM
Blog Comment Backlinks April 30, 2022 at 12:25 AM
Great survey, I'm sure you're gettingagreat response.	hogatoga com